Saka iwe unogona kuita yako iPhone doko kujekesa pasina Jailbreak | IPhone nhau
Jailbreak chimwe chinhu icho, kana iwe wakambozviedza, iwe unorangarira kuti sei chimwe chezvinhu izvo chakaita kuti iwe ude yako iPhone zvakanyanya. Nekudaro, izvo zvidiki zvikanganiso uye zvakajairika kugadzikana iyo yaakapa kuchishandiso nekufamba kwenguva - yakawedzera kune izvo zvitsva zvinhu izvo iOS iri kusanganisa gore negore - zvaita nharaunda kuti Jailbreak yayo iPhone yakadzikiswa zvakanyanya munguva pfupi yapfuura nguva.
Asi pachagara paine ruzivo uye sarudzo dzatinosuwa, izvo hazvina mubvunzo. Ndosaka pese pese patinoona nzira nyowani yekupa chimwe chinhu icho "chinotiyeuchidza" nezvenguva dzeJailbreak tisingafanirwe kuita maitiro aya kumagumo edu, tinouya kuzokuudza kuitira kuti chishuwo chienderere mberi. Uye, nekuda iOS ino sisitimu izere nediki netsikidzi (vhiki rapfuura takakuudza maitiro ekugadzira mafaira akatenderera panzvimbo yekwere) izvi zvinowanzoitika zvakanyanya kana zvishoma.
Kutenda neichi chidiki chidiki, chakawanikwa mu Redmon Pie, tinogona kuita kuti kurota kwevakawanda kuzadzike, izvo Siya kumashure kwekujeka kwedoko pane iyo iPhone. Patakaita kusvetukira kuIOS 7, ichi chaive chimwe chezvinhu zvakashoropodzwa kwazvo, uye kunyangwe nanhasi zvichiri kuenderera kuva nevanozvidza. Kana iwe uri mumwe weavo, usatombo kunetseka, uku kutaridzika kutaridzika kuri nyore kusiya kumashure pane zvinoita. Kunyangwe pamwe mutengo wekubhadhara wakanyanya.
Nezve hunyengeri hwatinokuudza kuti utange kushanda, iwe unofanirwa kungo chengetedza mufananidzo iwe waunowana pane reel pano. Kana izvo zvapera, enda kuZvirongwa> Wallpaper uye gadza ichi chifananidzo senge kumashure zvese pahwindo repamba uye yekuvhara. Kana izvi zvaitwa, kujeka kunenge kwaenda. Mari, hongu, kunyangwe uchiita izvi zvinoreva kuve neshuramatongo kune mutambo unotyisa Wallpaper.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro Ekuita iPhone Dock Transparent Pasina Jailbreak
Zvakanaka, hunyengeri hupi hwenhema, dhoko harina kumbobvira raitwa pachena, asi iyo yekumashure ivara rimwe chete
Wakatadza zvachose. Kana iwe ukaedza kugadzira kumashure iine yakafanana dock kara, dhoko rinogara rakaiswa kune rimwe ruvara. Uyu mufananidzo wakasarudzika wePNG. Edza kusevha ichi chifananidzo pakombuta yako uye undiudze kuti ndeapi mavara aunoona. Hehehe mazuva ese ini ndinoshamisika zvakanyanya uye kwete nezvavanoburitsa asi nemamwe mazwi. Munhu anotanga kutarisa hunyengeri kana chiri mufananidzo wakareruka obva atsoropodza.
chii chakashanduka? uyo anonyora posvo zuva rega rega iwe unopa mamwe marwadzo!
Haaahahahahahaha benzi riya! hahahahaha, iri peji ranga richishungurudza kwemakore mashoma
Endai kk haisi bug
Zve rini jailbreak ????
Chii chakashata chakatumira ichi
Yakagadzirwa ne ipad y3 uye haishande. Ios 9.3 beta 4
Pindura kuna jhon95n
Ios 9.1.2 iphone 6s + haichinje chero chinhu chinosara neiyo yakafanana Wallpaper